Golaha Ammaanka oo kulan ka yeelanaya xaaladda Soomaaliya - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Golaha Ammaanka oo kulan ka yeelanaya xaaladda Soomaaliya
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta kulan xasaasi ah oo ku ku saabsan xaalada dalka Soomaaliya ka yeelanaya , kaas oo ku qabaoomaya khadka Internet-ka.
Kulanka dadka qeybgalaya waxaa ka mid ah Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, Amb, James Swan, iyo Xubno kale oo isha ku haaya xaaladda xilligaan ee Soomaaliya.
Shirka ayaa waxaa warbixin la xiriirta xaalada siyaasadeed, mid doorasho iyo mid amni ee xilligaan dalka laga dhageysan doonaa Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, James Swan.
Previous articleMaxay ka wada hadleen Sheekh Shariif & Cali Guudlaawe?
Next articleWeerar lagu qaaday Saldhig ay ku sugan yihiin Ciidamo Kenyan ah